Inona ny tahan'ny famoahana? Ahoana no hanatsaranao ny tahan'ny fiakarana? | Martech Zone
Ny tahan'ny fihenam-bidy dia iray amin'ireo KPI izay mandany fotoana be dia be amin'ny famakafakana sy fanandramana hanatsara ny mpivarotra dizitaly. Na izany aza, raha tsy azonao tsara ny atao hoe bouncing, dia mety ho diso ianao amin'ny fanandramanao manatsara azy. Handeha hamakivaky ny famaritana ny tahan'ny fihenam-bidy aho, ny nuansa sasantsasany ary ny fomba sasany hanatsaranao ny tahan'ny fitroarana.
Famaritana ny tahan'ny bouncing
A Aza kivy dia fizarana misy pejy tokana ao amin'ny tranokalanao. Ao amin'ny Analytics, ny bouncing dia mikajiana manokana ho toy ny fivoriana izay tsy mitarika fangatahana tokana ho an'ny mpizara Analytics, toy ny rehefa manokatra pejy tokana amin'ny tranokalanao ny mpampiasa ary mivoaka avy eo nefa tsy miteraka fangatahana hafa amin'ny mpizara Analytics mandritra io fivoriana io.
Mba handrefesana tsara ny tahan'ny fihenam-bidy dia tsy maintsy raisintsika ny totalin'ny bounces ary esorintsika ny fitsidihana miresaka momba ny bilaogy mankany amin'ny tranokalan'ny orinasa. Ka - andao handeha hamakivaky senary fanintonana vitsivitsy:
Mpitsidika iray tonga amin'ny lahatsoratra bilaogy, tsy liana amin'ny atiny, ary miala amin'ny tranokalanao. Fanenjehana izany.
Misy mpitsidika iray miantsona eo amin'ny pejy fiantsonana ary avy eo dia manindry ny fiantsoana hanao hetsika hisoratra anarana ho an'ny fangatahanao. Izany dia mitondra azy ireo mankany amin'ny tranokala ivelany amin'ny subdomain na domain hafa izay mitana kaonty Google Analytics hafa. Fanenjehana izany.
Mpitsidika iray no tonga eo amina lahatsoratra iray avy amin'ny valin'ny karoka izay mitana toerana ambony ny pejinao… mandritra ny fe-potoana tsy azo ampiharina amin'ny vokatrao na serivisinao. Tsindrio ny bokotra miverina ao amin'ny tranokalan'izy ireo mba hiverenany amin'ny valin'ny fikarohana. Fanenjehana izany.
Ny hetsika dia mety hahatonga ny tahan'ny fihenam-bidy aotra
Ny tahan'ny fihenjanana dia matetika no jerena ho refy fandrefesana ny mpitsidika voalohany andraikitra amin'ny tranokala… fa mila mitandrina kosa ianao. Ity misy scenario iray mety hahagaga anao:
Mametraka analytics ianao hetsika eo amin'ny pejy… toy ny bokotra filalaovana tsindry, hetsika horonana, na fisehoan-javatra mipoitra miseho.
Hetsika iray, raha tsy voalaza hoe a hetsika tsy misy ifandraisany, ara-teknika andraikitra. Matetika ireo mpivarotra dia manampy zava-mitranga ao anaty pejy mba hanaraha-maso akaiky kokoa ny fifandraisan'ny mpitsidika amin'ireo singa ao amin'ilay pejy na rehefa misy zavatra miseho amin'ny pejy iray. Fiaraha-miasa ny hetsika, ka eo no eo dia mahita ny fiakaran'ny vidim-piainana izy ireo hatramin'ny zero.
Aza afangaro ny tahan'ny fivoahana amin'ny tahan'ny fiakarana. Ny tahan'ny fivoahana dia manokana amin'ny pejy tokana amin'ny tranokalanao ary raha nandao an'io pejy io ilay mpitsidika mba handeha amin'ny pejy hafa (eo an-toerana na tsia). Ny Bounce Rate dia natao manokana ho an'ny pejy voalohany nidiran'ny mpitsidika tao anatin'ny fotoana natombok'izy ireo tao amin'ny tranokalanao… ary raha nandao ny tranokalanao izy ireo taorian'ny fitsidihany.
Ireto misy andinindininy manokana Taham-pivoahana ary Tadiavo ho an'ny pejy manokana:
Ho an'ny fizarana pejy rehetra momba ny pejy, Taham-pivoahana dia ny isan-jato izay farany amin'ny fivoriana.
Ho an'ireo fivoriana rehetra manomboka amin'ny pejy, Tadiavo dia ny isan-jato izay ihany iray amin'ireo fivoriana.
Tadiavo fa ny pejy dia tsy miorina afa-tsy amin'ireo fotoam-pivoriana izay manomboka amin'io pejy io.
Mety hanimba ny fifampiraharahana ny fanatsarana ny tahan'ny fiantohana
Ny mpivarotra dia afaka manatsara ny taham-pisondrotany ary manimba ny firotsahana amin'ny tranokalany. Alao an-tsaina izany hoe misy olona miditra amin'ny pejy amin'ny tranokalanao, mamaky ny atiny rehetra ary mandahatra demo miaraka amin'ny ekipan'ny varotrao. Tsy nanindry zavatra hafa tao amin'ilay pejy mihitsy izy ireo… vao tonga, namaky ireo fiasa na tombontsoa avy eo, ary avy eo nandefa mailaka ilay mpivarotra.
Ara-teknika izany a Aza kivy… Saingy tena olana ve izany? Tsia, mazava ho azy tsia. Fifandraisana mahafinaritra izany! Ny sasany fotsiny dia nitranga tany ivelan'ny fahafahan'ny analytics hanatontosana ny hetsika.
Ny mpanonta sasany dia mampihena ny taha-pisondrotana noho ny fahitana tsara kokoa amin'ny mpanao dokam-barotra sy ny mpanohana. Izy ireo dia manao izany amin'ny fanaparitahana ny atiny ho pejy maro. Raha mila tsindrio iray amin'ny pejy 6 ny olona iray hamakiana lahatsoratra iray manontolo, dia nahomby ianao tamin'ny fampidinana ny tahan'ny fihenam-bidy SY ny fampitomboana ny fahitana ny pejy. Ity indray dia tetika hampiakarana ny tahan'ny dokam-barotrao nefa tsy ampiana soatoavina na ezaka ho an'ny mpitsidika anao na mpanao dokambarotrao.
Tena mahamenatra ity teknika ity ary tsy amporisihiko… ho an'ny mpanao dokam-barotra na ho an'ny mpitsidika anao. Ny zava-niainan'ny mpitsidika anao dia tsy tokony ho faritana amin'ny taha ambony fotsiny.
Fanatsarana ny tahan'ny fiakaranao
Raha te hampihena ny tahan'ny fihenam-bidy ianao amin'ny fomba mahomby, misy fomba vitsivitsy atoro anao:
Manorata atiny voalamina tsara sy voavoatra izay mifandraika amin'izay tadiavin'ny mpihaino anao. Mampiasà teny fanalahidy amin'ny fomba mahomby amin'ny alàlan'ny fikarohana vitsivitsy momba ny teny lakile izay manintona ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao, avy eo ampiasao ao amin'ny lohatenin'ny pejy, lohateny post, slug post, ary atiny. Izany dia hiantoka ny fitaovan'ny motera fikarohana anao araka ny tokony ho izy ary tsy ho tonga any amin'ny tranokalanao izay tsy liana ianao ary hipoaka izany.
Ampiasao ireo rohy anatiny ao anaty ny atiny. Raha tonga amin'ny tranokalanao ny mpihaino anao hitady fikarohana manokana - fa ny atiny tsy mifanaraka - ny fananana rohy vitsivitsy amin'ny lohahevitra mifandraika dia afaka mitazona ireo mpamaky anao. Azonao atao ny manana tabilaon'ny index misy tsoratadidy izay manampy ny olona hitsambikina amin'ny subtopika manokana na lohateny (ny fipihana tsoratadidy dia fiankinan-doha).
Manaova auto-mamoaka lahatsoratra mifototra amin'ny tagging na teny lakile. Ho an'ny bilaogiko dia mampiasa aho Lahatsoratra mifandraika amin'i Jetpack endri-javatra ary izy io dia asa lehibe amin'ny fanomezana ny lisitry ny lahatsoratra fanampiny izay misy ifandraisany amin'ny marika nampiasainao ho an'ny hafatrao ankehitriny.
Mora ny mampiasa ny Google Tag Manager fisehoan-javatra amin'ny famindrana amin'ny pejy iray. Aleo atrehana… ny mpampiasa iray izay mandehandeha amin'ny pejy dia andraikitra. Mazava ho azy, te-hanara-maso ny fotoananao eo amin'ny toerana sy ny mari-pahaizana momba ny fiovam-po ihany koa ianao mba hahazoana antoka fa mahasoa ny tanjona amin'ny ankapobeny ny hetsika.
Fanesorana ireo fitsapana izay tena fampiraisana
Tadidio ny scenario nataoko tetsy ambony izay nolazaiko fa nisy niditra tao amin'ny tranonkalanao, namaky ny pejy, avy eo nanindry tamin'ny tranokala ivelany hisoratra anarana? Azonao atao ny manao zavatra roa mba hahazoana antoka fa tsy voasoratra anarana ho toy ny fanararaotana ao amin'ny tranokalanao ity:
Mampifandray hetsika iray amin'ny tsindry ny rohy. Amin'ny fampidirana hetsika iray, dia nesorinao ny bouncing rehefa mitsidika ny toerana itiavanao azy ireo ny mpitsidika iray. Azo atao izany tsindrio-to-antso na ny rohy fanindriana amin'ny mailaka ihany koa.
Manampia pejy fanodinana interstitial. Raha tsindrio aho hisoratra anarana ary avy eo miantsona amin'ny pejy anatiny iray hafa izay manara-maso ny tsindry ary mamily ny olona mankany amin'ny pejy ivelany, izay isaina ho toy ny fahitana pejy hafa fa tsy fitroarana.
Araho maso ny fironana momba ny tahan'ny fihenjanana
Manoro hevitra anao aho mba hifantoka amin'ny taham-pamoahana rehefa mandeha ny fotoana fa tsy manahy momba ny ohatra iray etsy sy eroa. Amin'ny fampiasana ireo teknika etsy ambony, azonao atao ny manoratra an-tsoratra ny fanovana ao anaty analytics ary avy eo dia jereo ny fomba hanatsarana ny taham-panafosanao na miharatsy izany. Raha mifampiresaka amin'ireo mpiray antoka aminao ianao amin'ny tahan'ny fihenam-bidy amin'ny maha KPI anao, dia manoro hevitra aho ny hanao zavatra vitsivitsy ao anatin'izany.
Ampitao hoe inona ny tahan'ny fihenam-bidy amin'ireo mpandray anjara.
Ampahafantaro ny antony mety tsy nahitana mari-pahaizana ara-tantara tsara ny taha ambony.
Ampahafantaro ny fiovana mahatalanjona amin'ny tahan'ny fihenam-bidy rehefa manampy zava-mitranga ao amin'ny tranokalanao ianao hanaraha-maso tsara ny fifamatorana.
Jereo ny fironana momba ny tahan'ny fitohitohizanao rehefa mandeha ny fotoana ary manohiza manatsara ny rafitry ny tranokalanao, ny atiny, ny fitetezana anao, ny fiantsoana-hetsika ary ny hetsikao.
Ny fehiny dia aleoko manao mpitsidika hiditra pejy iray, mahita izay rehetra ilain'izy ireo, ary asaivo mifandray amiko izy ireo na hiala. Ny mpitsidika tsy misy dikany dia tsy fanenjehana ratsy. Ary ny mpitsidika efa niova fo izay niova fo nefa tsy nandao ilay pejy nolalovany akory dia tsy fanararaotana ratsy koa. Ny famakafakana ny tahan'ny bouncing dia mitaky asa fanampiny kely fotsiny!
Tags: AnalyticsAza kivybounce rateGoogle Analytics
29 Nov 2009 tamin'ny 1:30 PM
Tsy nieritreritra ny hanao zavatra toy ireo fomba fitaka ireo mihitsy aho mba hampitomboana ny fomba fijerin'ny pejy. Manana tahan'ny fihenam-bidy ambany sahady aho ato amin'ny tranokalako, satria tsy olana be loatra izany, heveriko fa tsy nila nieritreritra an'izany aho!
Raha ny momba ireo fomba natolotra anao dia nampiasa plugin plugin mifandraika elaela aho ary mampitombo ny fijerena pejy. Tsy mbola nahazo ny fampifandraisan-doha atiny anefa aho.
Ny lahatsoratro farany The Box Girl's Secret of Secrets Review